Madaxweyne Buhari oo booqday jiidda hore ee dagaalka - BBC News Somali
Madaxweyne Buhari oo booqday jiidda hore ee dagaalka
Guddoomiyihii guddiga amniga baarlamaanka K/G oo lagu dilay Baydhabo
Doorashooyinka deegannada Somaliland oo dib loo dhigay
Senegal oo codsatay in loo soo celiyo farshaxanadii laga dhacay
Baarlamaanka Soomaaliya oo kala diray guddiga miisaaniyadda
Tebinta tooska ahayd intaasi ayay inooga dhan tahay, halkan kala socda wararkii ugu dambeeyay soomaalida iyo caalamka.
Madaxweyne BuhariImage caption: Madaxweyne Buhari
Madaxweynaha Nigeria Muhammadu Buhari ayaa booqasho maalin qaadaneyso ku tagey magaalada Maiduguri ee waqooy bari dalkaasi, halkaas oo ah goobtii ay kasoo faracmeen ururka Booko Xaraam.
Madaxweynaha wuxuu la hadlay ciidammada dagaalka kula jiro kooxda Bookoo Xaraan ee ku sugan jiidda hore ee dagaalka.
Booko Xaraam ayaa argagax ku haysaa shacabka ku nool waqooy bari dalkaasi.
Buhari wuxuu sidoo kale booqday ciidammada dhaawac ah ee lagu daweynayo saldhig militari oo ku yaalla magaalada Maiduguri.
Booqashada Buhari ayaa imaaneysaa xilli dhawaan kooxda Booko Xaraam ay weerar ku qaadeen saldhig militari oo ku yaalla magaalada Metele halkaas oo ay ku dhinteen 40 askari.
Posted at 12:39 28 Nov12:39 28 Nov
Faahfaahinta halkan ka akhri.
Posted at 11:45 28 Nov11:45 28 Nov
Madaxweynaha Afqanistaan: Waxaan soo gabagabeynay qorshaha wadahadallada Taalibaan
Madaxweynaha Afqanistaan, Ashraf GhaniImage caption: Madaxweynaha Afqanistaan, Ashraf Ghani
Madaxweynaha Afqanistaan Ashraf Ghani ayaa sheegay in dowladdiisa ay soo gabagabeeysay qorsheyaal wadahadallo nabadeed ay kula yeelaneyso ururka Taalibaan.
Ashraf Ghani oo ka hadlayay shirka Qaramada Midoobey ee ka socday magaalada Geneva wuxuu sheegay in la sameeyay koox ka kooban 12 xubnood oo wadahadallada nabadeed la geli doono ururka Taalibaan.
Waxayna wadahadallada noqon doonaan kuwo ku saleysan dimuqraaddiyadda iyo Isfahan labada dhinacba.
Wuxuu sheegay in arrimaha nabadda ay muhiim u tahay doorashada xigta ee dalkaasi ka dhici doonto.
Ururka Taalibaan weli kama aysan hadlin hadalka kasoo baxay madaxweynaha balse horraan ay ku adkeysteen inay wadahadallo toos aha la yeelan doonaan Mareykanka balse aysan la geli doonin xukuumadda Afqanistaan.
Posted at 11:03 28 Nov11:03 28 Nov
War-saxaafadeed kasoo baxay baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in la kala diray guddiga miisaaniyadda,maaliyadda,qorsheynta iyo la xisaabtanka ee baarlamaanka.
Ujeeddada loo kala diray guddigan ayaa lagu sheegay in khilaaf uu ka dhex jiro guddiga maaliyadda baarlamaanka isla markaasna la baarayo iyo wada shaqeyn la’aan ka dhex taagaan xubaha guddigan.
Warqadda kasoo baxday guddoonka golaha shacabka ayaa sidoo kale lagu sheegay in si deg deg ah loo soo magacaabayo guddi maaliyadeed oo cusub iyo in la qaban doono doorashada guddoon cusub.
Posted at 10:35 28 Nov10:35 28 Nov
Guddiga doorashooyinka Somaliland : Lama hayo kharashkii lagu qaban lahaa doorashada
Guddiga doorashooyinka Somaliland ayaa sheegay in aanay doorashadii baarlamaanka iyo tii dawladaha hoose ku qabsoomayn xiligii loo qorsheeyay oo ahaa 29 Marso 2019-ka.
Guddiga waxay dibu dhaca doorashada ku sababeeyeen dhowr qodob oo ay kamid yihiin in aan wali la ansixin xeerkii doorashooyinka.
Waxayna sidoo kale shegeen inaysan jirin kharashkii doorashada lagu gali lahaa ee ay bixin jiren deeqbixiyayaashu, Sidoo kalena uu jiro muran u dhexeeya iyaga iyo xisbiga Waddani oo sheegay in aanay ku kalsoonayn guddiga doorashooyinka.
Balse guddiga dooraashooyinka ma aysan sheegin xilliga la qabanayo doorashooyinka.
Posted at 9:50 28 Nov9:50 28 Nov
Madxafka cusub ee laga furayo SenegalImage caption: Madxafka cusub ee laga furayo Senegal
Dowladda Senegal ayaa ka codsatay Faransiiska inay dib u soo celiyo dhammaan farshaxanadii laga dhacay dalkaasi ee hadda yaalla madxaf ku yaalla dalka Faransiiska.
Toddobaadkii lasoo dhaafay,warbixinno ay soo gudbiyeen khuburro loona gudbiyay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa lagu taliyay in dhammaan waxyaabihii taarikhiiga ahaa ee sida sharci darrada ah looga qaatay dalalka Afrika lagu celiyo dalalkii asal ahaan laga keenay.
Hadalkan dowladda Senegal ayaa imaanaya xilli madfax cusub oo lagu ilaalin doono waxyaabaha dhaxal-galka u ah qaaradda laga furayo magaalada caasimadda ah ee Dakar.
Wasiirka dhaqanka Senegal, Abdou Latif Coulibaly ayaa BBC-da u sheegay inuu soo dhaweynayo hadalka madaxweynaha ah in dib loo soo celinayo dhammaan farshaxanadii laga dhacay dalkaasi.
Posted at 9:32 28 Nov9:32 28 Nov
Guddiga doorashooyinka Jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madaxbannaanida ee Somaliland ayaa shaaca ka qaaday inay dib u dhigeen xilligga la qaban lahaa doorashada deegannada.
Balse guddiga ma aysan sheegin wakhtiga la qabanayo doorashada Somaliland.
Wixii faahfaahin ah halkan ayaan idiin kuugu soo gudbin doonaa.
Posted at 9:12 28 Nov9:12 28 Nov
Kulanti wacan oo waangasan akhyaarta halka nagala socotaay, kusoo dhawaada tebinta tooska oo aan idiin kuugu soo gudbinno wararkii ugu dambeeyay soomaalida iyo caalamka.
Waa Arbaco taarikhda waxay ku beegantahay 28 bisha Nofembar sannadka 2018-ka.
Posted at 14:20 27 Nov14:20 27 Nov
ELAINE JUNGCopyright: ELAINE JUNG
Jean Pierre,oo 32 jir ah waxay ku nooshahay tuulada Mwulire ee bariga dalka RwandaImage caption: Jean Pierre,oo 32 jir ah waxay ku nooshahay tuulada Mwulire ee bariga dalka Rwanda
Faahfaahinta halka ka akhri
Ciidammada dowladda iyo Al Shabaab oo ku dagaallamay gobolka Hiiraan
Wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya waxay sheegayaan in barqanimadii maanta uu iska hor'imaad ka dhacay deegaanno u dhaxeeya tuulooyinka Hees iyo Madhooy oo ku yaalla bariga gobolka Hiiraan.
Dagaalka ayaa bilowday kadib markii ciidamo ka tirsan kuwa dawladda oo ka baxay Beledweyne kuna socday Maxaas ay is heleen ciidamo ka tirsan xarakada Al-Shabaab.
khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh ayuu dagaalkaasi dhaliyay.
Taliye ka tirsan ciidammada dowladda Soomaaliya ayaa BBC-da u sheegay inay jirto dhimasho balse dhankooda waxa khasaare uusan kasoo gaarin dagaalka dhexmaray ciidammada dowladda iyo kuwa Al Shabaab.
Posted at 9:24 27 Nov9:24 27 Nov
Mucaaradka iyo xukuumadda Itoobiya oo uu shir furmay
Waxaa magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya maanta ka furmay shir ay leeyihiin mucaaradka iyo xukuumadda, waxaana looga hadlaya arrimaha ku saabsan doorashada 2020-ka ee dalkaasi ka dhici doonto.
Ra’iisul wasaaraha Itoobiya, Abiy Axmed oo kulanka soo qabanqaabiyay ayaa sheegay in kulanka ay uga hadlayaan sidii doorashada caddaalad ah, xor iyo nabad ah u dhici lahayd.
Shirka oo hadda socda waxaa la filayaa inay kasoo saaraan qodobada doorashada oo wax ku ool ah oo ay isku afgartaan mucaaradka iyo dowladda Itoobiya.
Kulanka waxaa ka qeyb galaya ra’iisul wasaaraha Itoobiya iyo hoggaamiyeyaal mucaaradka ka socda.
Abiy Axmed ayaa madaxda mucaaradka kala hadlaya sidii loo sii xoojin lahaa isbadallada horumarineed ee dalkaasi ka socda.
Posted at 16:44 26 Nov16:44 26 Nov
Posted at 13:43 26 Nov13:43 26 Nov
Dhul gariir ku dhuftay dalka Iiraan
Dhul gariirka ayaa burbur u gaystay dhismayaal ku yaalla caasimadda Iiraan ee TehranImage caption: Dhul gariirka ayaa burbur u gaystay dhismayaal ku yaalla caasimadda Iiraan ee Tehran
In ka badan 700 qof ayaa ku dhaawacantay dhul gariir ka dhacay galbeed dalka Iiraan, sida uu ku warramay telefishinka dowladda.
Dhul gariirka oo lagu qiyaasay cabirkiisa 6.3 ayaa si wayn ugu dhuftay gobolka Kermanshah halkaas oo sannadkii lasoo dhaafay ay ku dhinteen in ka badan 600 qof kaddib markii dhul gariirkii ugu ba’na uu halkaasi ku dhuftay muddo tobonaan sana ah.
Dhul gariirka ayaa laga dareemay guud ahaan gobolka, wararka soo baxaya waxay sheegayaan in hal qof uu ku dilay meel u dhaw gobolka Kurdistan ee dalka Ciraaq.
Wax dhimasho iyo dhaawac ah lagama soo sheegin dhul gariirka ku dhuftay Iiraan.
Posted at 12:41 26 Nov12:41 26 Nov
Dibadbax looga soo horjeedo booqashada Maxamed Bin Salmaan oo laga qorsheeyay Tunisia
Ururada bulshada rayidka ee dalka Tunsia ayaa ku baaqay in la qabto maanta gelinka dambe dibadbaxyo looga soo horjeedo booqashada dalkaasi uu ku tegayo dhaxal sugaha Sucuudiga Maxamed bin Salmaan, sida ay ku warrantay wakaaladda wararka ee AFP.
Waxay ka careysan yihiin ururadan dilkii loo gaystay weriyaha Sucuudiga u dhashay Jamaal Khaashogji.
Aqalka madaxtooyada Tunisia wuxuu ku warramay in Talaadada uu dhaxal sugaha booqasho ku tegi doono Tunisia, waxayna qeyb ka tahay booqasho hoggaamiyeyaasha Imaaraatka Carabta iyo Baxreyn ay ku tegayaan halkaasi.
Posted at 10:34 26 Nov10:34 26 Nov
Qarax ka dhacay degmada Wadajir
Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho waxay sheegayaan in gordhaw uu qarax ka dhacay suuq ku yaalla xaafadda Kaawo Godey ee degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho
Saraakiishaa caafimaadka waxay sheegeen in ugu yaraan 10 qof ay ku dhaawacmeen qaraxa isla markaasna loo qaaday isbitaallada.
Waxay intaasi ku dareen saraakiisha in dhimasho ay jirto balse iyo ilaa hadda aanan la xaqiijin karin khasaaraha.
Qaraxa ayaa loo adeegsaday baabuur waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay.
Posted at 9:51 26 Nov9:51 26 Nov
Museveni: shilkii ka dhacay harada Victoria waxaa sabab u ahaa rar xadh dhaaf
Doonta ayaaa ku qalibantay degmada Mukono oo u dhaw magaalada KampalaImage caption: Doonta ayaaa ku qalibantay degmada Mukono oo u dhaw magaalada Kampala
Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa sheegay inuu rumaysan yahay in rar xadh dhaaf uu dhaliyay shilka shalay ka dhacay harada Victoria oo ay ku dhinteen ugu yaraan 30 qof.
Doonta waxaa loogu talagalay inay qaaddo rakaab gaarayo 50 qof halka ay doonta sidday 120 qof markii ay qalibantay.
Waxaa weli harada ku maqan dad badan oo la la’yahay. Rakaabkii doonta saarnaa waxay ku wajahnaayeen munaasabad ka dhaceysay aaggaasi.
Madaxweynaha Uganda wuxuu sheegay in dadka kaxeeya doomaha ee aanan haysanin sharciga la maxkamadeyn doono.
Posted at 9:33 26 Nov9:33 26 Nov
Tiro dad ah oo ku dhintay weerarka ka dhacay Galkaacyo
Ku dhawaad 20 ruux oo uu ku jiro Sheekh Cabdiweli Cilmi Yare ayaa lagu dilay magaalada Gaalkacayo.
Alshabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda qaraxa.
Afahayeen u hadlay booliska ayaa sheegay in dabley hubaysan iyo isa soo miidaamiyay ay beegsadeen goob Suufida ay ku xusayeen xuska Mowliidka magaalada Gaalkacyo ee bartamaha Soomaaliya.
Posted at 9:30 26 Nov9:30 26 Nov